Amathiphu nezeluleko zokwelashwa kwama-calluses nama-corns
Izindlela zokulwa nama-calluses nama-corns, ama-ointments kanye namakhambi abantu.
Amagundane noma ama-corn angalungile kunzima kakhulu kithi ekuphileni kwansuku zonke, kunciphisa ukunyakaza. Ubuhlungu obunzima, obuhambisana nama-flares abukhali, uma sihamba endaweni emelekile yesikhumba, intukuthelo. Ngokungangabazeki, njengezinye izilonda zesikhumba, ama-callus eyomile ezinyaweni nasemaphakeni adinga ukwelashwa namafutha afanelekayo nezinye izindlela, ngaphandle kwalokho ugcwele izinkinga, kuze kufike ekungeneni kokuhlinzwa.
Kusho ngokumelene nama-calluses owomile nama-corns
Njengomthetho, esithende nasesikhumba esiseduze neminwe, inyawo livame ukuthinteka, futhi livame ukuthinta inzwane emikhulu, ekwakheni okuthiwa i-corn nge stem, uma into yangaphandle noma ukutheleleka kungena enxebeni.
Nansi ummbila ngesitshalo esithombeni
Kubalulekile ukwazi ukuthi izilonda ezinjalo zesikhumba zivame kakhulu, okusho ukuthi kunezinhlobo eziningi zamafutha, ama-creams neminye imikhiqizo. Imininingwane eminingi mayelana namafutha nama-creams sizokhuluma ngezansi, sinikeze izibonelo ezithile namagama, kepha lapha sizokutshela amaphuzu ajwayelekile, ngenxa yokuthi uzokhetha ukhetho olungcono kakhulu lwezokwelapha.
Yini ehlanganisiwe ekulungiseleleni?
Ingxenye eyinhloko yazo zonke izindlela zokwelapha i-calluses i-salicylic acid. Ngenxa yethonya layo endaweni ewonakele, i-honeycomb ithambekisiwe futhi emva kwezinsuku ezimbalwa isuswe ipumise. Ungasebenzisa kanye nezindlela zomuntu, okuyilokhu kuphumelela nalokhu:
Amanzi okugeza ngezinyawo nesepha ne-soda. Zithathwa zingakapheli isigamu sehora, emva kwalokho isikhumba sinyunywe futhi ukhilimu oshuthumayo isetshenziswa;
ukugeza nge-potassium permanganate nosawoti - kusiza ngobuhlungu, kunciphisa kakhulu;
Gcoba amazambane agayiwe nge-gauze bese uwabopha emlenzeni ukuze uthinte ummbila.
Kunconywa ukwenza lotion ebusuku.
Amafutha avela emagumbini kanye nama-calluses. Izibonelo zamathuluzi amahle
Akukhona ngaso sonke isikhathi esivumelana nokusebenzisa izindlela zokwelapha zendabuko futhi, ngokukhuluma ngokukhululekile, akusebenzi ngendlela esebenzisa amafutha akhethekile futhi ngaphandle "kwemidanso ngama drubini" ukuze uziqede izidakamizwa ezicasulayo.
Nazi ezinye izinhlayiya ezinhle kakhulu:
I-salicylic ointment ingenye yezindlela ezishibhile futhi ezisebenzayo kakhulu. Leli gama litholakala ngenxa yokuthi kukhona ingxenye enkulu - i-salicylic acid, ukubulala ama-microbes, ukomisa indawo yesikhumba esilimaziwe nokukhulula ukuvuvukala. Intengo ingaphakathi kwe-$ 1;
Amafutha "Antimozolin" noma "Super Antimozolin" umkhiqizo obiza kakhulu, ngenxa yokuthi ngaphandle kwe-asidi salicylic iqukethe konke okwakhiwa kwamakhemikhali nokwenza ngcono. Ukusebenza kahle futhi kuphakeme, kodwa intengo ingaphakathi kwe $ 2;
Ukulungiselela "i-Bensalitin" ne-antimosol "izinsuku ezingu-5" - babe nesakhiwo esifanayo sezingxenye, njenge- "Antimozolin", isimiso esifanayo sokusebenza. Bobabili bema cishe u-$ 1.5.
Wonke lawa mafutha - usizo olukhulu kakhulu ekuxazululeni izinkinga, zithandwa kahle ngabantu. Ngakho-ke, uma kukhona ikhemisi eliseduzane - hamba uphinde uthole ukuthi imikhiqizo enjalo iyatholakala yini kubo. Uma kungenjalo-cela noma iyiphi ikhambi, lapho ukubunjwa kuqukethe i-salicylic acid.
Ama-creams nama-balms kusuka kuma-calluses nama-corns
Ngaphandle kokwelashwa ngokuqondile kwamakhompiyutha omisiwe kanye namabele, ungakhohlwa ukuphatha isikhumba ezindaweni ezilimaziwe nge-balsams nama-creams. Noma iyiphi i-agent yansuku zonke ngamafutha izokwenza. Okufanelekile, uma kukhona ubisi obusuka kanye ne-thiourea - banomphumela omuhle wokulwa nokuvuvukala, unciphisa isikhumba futhi akhuthaze ukuphulukiswa ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, kunconywa ukusebenzisa amafutha e-fir, okwenza umgoqo ngokumelene nama-bacterium nezinye izidakamizwa futhi uvikele isikhumba ezinyaweni ezivela ezinkampanini, ezibangela izinkinga.
Qaphela izinyawo zakho, ugqoke izicathulo ezikhululekile, amasokisi kuya kwesayizi, noma usebenzise ama-balms nama-cream okuvimbela ngokuhlelekile. Khona-ke ukwelashwa kwama-calluses owomile nge-stem kanye nezinye izinhlobo zemifino kungagwenywa kalula.
Izimbangela zokushintsha kwenani lama-chromosomes
Utshwala luyithinta kanjani umzimba wesifazane?
Izinqubo zokuvuvukala emzimbeni womuntu
Ukuhlanza umzimba ekhaya ngezinzuzo zezempilo
Indlela Yokukhetha Isikhathi Esifanele Sokuphumula
I-nausea ekukhulelwe: yini okufanele uyenze?
Amalensi ambala anamehlo aluhlaza
Kumnandi ukuhalalisela indodana yakhe ku-Day Defender of the Fatherland ngoFebhuwari 23
Ingabe intsha kufanele ihlale nabazali bayo?
Ithikili yokusiza ingane yokuqala emgwaqweni, olwandle, e-cottage
Abantu abasimisiwe 2: ozonqobayo maduzane uzokwaziwa!
Yini ongayifunda kumuntu wanamuhla?
Ukudla ubuthi emntwaneni, izimpawu
Amakhemikhali avela kumabala e-pigment
Amaqiniso angu-3 ngokumelene ne-non-stop sex
Akungabazeki: izithombe namavidiyo we-Pelagia ekhulelwe
Amapancake nge-inkukhu nesibindi
Ingulube Inkukhu Inkukhu